Akụkọ - Nnukwu ọrụ ikpo okwu na-ebuli
Nrụ Ọrụ Dị arọ Platform ebuli, jiri ya tụnyere Mobile kọlụm lifts, nwere ike ikwe ka ngwa ngwa na-aga na & anya. Ọtụtụ ọrụ na ụgbọ ala azụmahịa bụ nnwale & mmezi dị mfe, nke ekwesịrị ịkwụsị ngwa ngwa. Site na ịwelite Platform, onye ọrụ nwere ike ịnagide ọrụ ndị a nke ọma, nke nwere ike ịchekwa oge gị. Ebugharị n'elu ikpo okwu dị na nzukọ, mmezi, ndozi, mgbanwe mmanụ na ịsa ụgbọ ala azụmahịa dị iche iche (ụgbọ ala obodo, ụgbọ njem na etiti ma ọ bụ nnukwu ụgbọ ala).
Dị ka naanị ọkachamara ụgbọ ala hydraulic azụmahịa na-ebuli onye na-emepụta ihe na China, na onye na-eduga ụgbọ ala na-ebuli onye na-emepụta ihe gburugburu ụwa, MAXIMA na-emepụta ma na-eme ka ikpo okwu 1 na 2016
MAXIMA Platform lifts adopts pụrụ iche haịdrọlik vetikal n'ibuli usoro na elu-nkenke itule akara ngwaọrụ iji hụ na zuru okè mmekọrịta nke haịdrọlik cylinders na-eji ire ụtọ na-eweli elu na ala.
Mgbe afọ nke mmepe, anyị ọkachamara injinia na-emelite imewe nke n'elu ikpo okwu lifts na yiri ngwa. Ọ dị obi ụtọ ịkpọsa nke a, MAXIMA nwere ike ime ka ikpo okwu dị n'ime ala ma ọ bụ na-ebuli elu ugbu a. Na ogologo nke ikpo okwu lifts nwere ike ịbụ 7 mita, 8 mita, 9 mita, 10 mita, na 11.5meters. MAXIMA kwadebere n'elu ikpo okwu site na iji ọrụ jacking dị arọ, nke ike ibuli elu nwere ike ịbụ 12.5Tons kwa otu.
Na 2018, MAXIMA platform lifts na-asọpụrụ ka ụlọ ọrụ asambodo Israel kwadoro ya. Kemgbe ahụ, enyerela ndị agha Israel iri nke ihe ndozi MAXIMA. N'otu afọ ahụ, asọpụrụ MAXIMA platform lifts na-asọpụrụ iji nweta akwụkwọ asambodo CE.
Chee echiche ụgbọ ala ụgbọ elu, chee MAXIMA echiche. Na ngwaahịa dị mma, na ọrụ ọrụ ọkachamara sitere na MAXIMA & onye na-ekesa anyị, MAXIMA uche ga-eme ka ọrụ gị dị mfe. Mgbe obula ichoro nkwado, MAXIMA ga ano gi n’aka. Na-enye anyị ohere ịnye gị ndụmọdụ ọkachamara na ihe ngwọta iji kwado ajụjụ ọ bụla, kpọọ ugbu a 0086 535 6105064.